Soo hel fikradaha si aad dib ugu isticmaasho dhalooyinka waaweyn ee dhalada ah | Bezzia
Susana Garcia | 01/05/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 29/04/2021 21:00 | Guriga
El dib u warshadaynta firfircoon iyo hal-abuurka waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican in aan sameyn karno si aan nolosheena uga dhigno wax yar oo waara oo maalinle ah. Maalin kasta waxaan u isticmaalnaa dhalooyinka dhalooyinka ku jira cuntooyin badan sida jaam ama digirad. Qasacadahaan waxaa lagu tuuri karaa weelka dib-u-warshadaynta laakiin waxaan sidoo kale qaarkood u isticmaali karnaa waxyaabo cusub, taas oo ah hab kale oo dib-u-warshadeyn ah oo waliba cimri dheer ku siisa muraayada.
Taasi waa sababta maanta aan u soconno fiiri sida dib loogu isticmaalo dhalooyinka dhalada ah, aasaasi aad u fudud oo aan dhamaanteen guriga ku wada leenahay oo aan wax weyn ku qaban karno. Soo hel oo soo qaado dhammaan dhalooyinkaas quraaradaha ah ee aad illaa hadda tuurtay una diyaarso inaad mar kale ugu adeegsato waxyaabo kala duwan. Waxaad arki doontaa inay jirto adduun dhan oo la ogaan karo.
1 Dhalooyinka dhalooyinka lagu keydiyo dhir udgoon
2 Ku shub dhir udgoon dheryahaaga
3 U isticmaal dhalooyinka sidii tuubato
4 Abuur nalalka cajiibka ah
5 Dhalooyinka dhalooyinka si wax loogu kaydiyo
Dhalooyinka dhalooyinka lagu keydiyo dhir udgoon
Fikrad wanaagsan haddii aad rabto inaad keydiso dhowr waxyaalood ayaa ah inaad soo uruuriso dhalooyinka quraaradaha oo isku cabir ah ama isku qaab ah. Sidan ayaa aad ugu fududaan doonta wax walba in la isku daro oo u muuqdo mid wanaagsan. Adiguna waad awoodaa iibso dabool isku mid ah ama xitaa ku rinji isku midab. Way fududahay in la helo sumado waxyaabo kala duwan sida kafee, xawaash, ama buskud, laakiin sidoo kale waxaa jira calaamado u eg sida sabuuradda oo aad gadaal ku qori karto wayna ka sii badan yihiin. Waa hab fiican in dib loo isticmaalo gasacadaha oo aan loo iibsan kuwa kale in lagu kaydiyo waxyaalahan oo kale. Dariiq loo isticmaalo wax aad uga yar.
Ku shub dhir udgoon dheryahaaga
Basbaaska yar yar ayaa lagu dhex beeran karaa meelo yaryar. Marka waa run inaan doonyahaas u adeegsan karno inaan wax ku beerno qaar waxay jecelyihiin dhir yar ama oregano tusaale ahaan. Abuuritaanka noocan ah waxay naga caawinaysaa inaanan wax badan iibsan waxaan kaloo ogaanay sida xiisaha leh ee ay u noqon karto inaad sameysato waxyaabahaaga sida dhir udgoon oo ay fududahay dayactirkeeda iyo daryeelkeeda Sidan waxaad kuheleysaa dhir gebi ahaanba cusub jikadaada iyo maalgashi badan.
U isticmaal dhalooyinka sidii tuubato
Hab kale oo dib loogu noqdo adoo adeegsanaya dhalooyinkaan yar yar ee dhalada ah waa inaad qaadatid cunto fudud saq dhexe ama galab. Waa run in dhalooyinka culeyskoodu ka badnaan karo laakiin muraayadda ayaa aad uga caafimaad badan haddii aan cuntada ku kululaynayno microwave ama dib u isticmaalno. Dhalooyinkaas waxaad ku qaadan kartaa saladh yar ama cunto fudud maalin kasta si aad ugu cuntid shaqadaada ama meesha aad wax ku barato. Sidan ayaad dib ugu isticmaali kartaa marar badan.
Abuur nalalka cajiibka ah
Dhalooyinka muraayadaha ayaa mar kale gabal noqon kara u isticmaal qurxinta gurigeenna. Xaaladdan oo kale waxaan u isticmaali karnaa dhalooyinka dhalada ah qaybo ka mid ah nalka qaabka warshadaha. Waxaa jira laambado badan oo leh nalalka hawada ku jira laakiin waxaan u isticmaali karnaa daasadaha si aan u iftiimino iftiin badan una siino taabasho kale, mid warshadeed iyo mid asal ah wali. Waa isbeddel adag in la sameeyo laakiin hubaal waxay isu beddeli kartaa inuu noqdo laambad runti cajiib ah.
Dhalooyinka dhalooyinka si wax loogu kaydiyo
Daasadahaani waxay ku fiican yihiin abaabulka waxyaabaha guriga ka socda. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku habboon yihiin jikada, sidaas darteed waxaa jira dad badan oo u isticmaala jikada si ay u abaabulaan waxyaabo ay ka mid yihiin jarjaran. Laga yaabaa in aad kudar tag si aad wax walba uguhesho bartaada oo isticmaal dheriga meel kasta oo la dhigaayo. Waa hab sahlan oo looga dhawro gacantooda markaan u baahanahay. Marka waxaan ku haysan karnaa meelaha ugu badan ee doomaha ku dhow. Waa fikrad aad u fudud laakiin waxay noqon kartaa mid aad u wanaagsan haddii aan doorano dhalooyinka quraaradaha qurxoon oo lagu qurxin karo dhar ama xarig.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Fikradaha in dib loo isticmaalo dhalooyinka dhalada ah